Steven Gerrard: Luis Suarez waa weeraryahankii ugu fiicnaa ee aan abid la ciyaaro. - Caasimada Online
Home Warar Steven Gerrard: Luis Suarez waa weeraryahankii ugu fiicnaa ee aan abid la...
Steven Gerrard: Luis Suarez waa weeraryahankii ugu fiicnaa ee aan abid la ciyaaro.
Steven Gerrard ayaa cadeeyey in ciyaaryahanka ay iskala ciyaaraan Liverpool Luis Suarez uu yahay weeraryahankii ugu wanaagsanaa ee uu abid la ciyaaro.
Kabtanka xulka England, ayaa lasoo ciyaaray weeraryahano badan sida Robbie Fowler, Michael Owen, Fernando Torres iyo Wayne Rooney, wuxuuna ugu sara mariyey weeraryahanka reer Uruguay intii lagu jiray Su’aalo uu kaga jawaabayey akoonkiisa Twitter-ka.
Markii la weydiiyey waa kee weeraryahankii ugu weynaa ee aad abid lasoo ciyaarto 32 jirkaan ayaa ku jawaabay: “Luis Suarez.”
Kabtanka Reds ayaa sidoo kale daaha qadaay inuu jeclaan lahaa inuu la ciyaaro Xabi Alonso, kaasoo ay Liverpool 2009kii ka iibisay Real Madrid, isagoona ku daray inuu jeclaan lahaa inuu dib ugu soo celiyo Anfield.
“Xabi Alonso waa ciyaaryahankii qadka dhexe ugu fiicnaa ee aan lasoo ciyaaray, waan u xiisay inaan la ciyaaro,” ayuu ki daray.